AMAPHILISI APHEPHILE OKUKHIPHA IZISU +27718507838 | +17632302681 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
DWQA Questions › AMAPHILISI APHEPHILE OKUKHIPHA IZISU +27718507838 | +17632302681
Senza konke okusemandleni ethu ukuze uzizwe ukhululekile ngesikhathi sokucindezeleka ngokomzwelo ngoba siyaqonda ukuthi kuyini ukukhulelwa okungahlelelwe. Futhi siyazi ukuthi ukukhetha ukunqamula ukukhulelwa kungaba enye yezinketho ezinzima kakhulu empilweni kodwa uma usenze leso sinqumo, qiniseka ukuthi awuwedwa. Ungase udideke futhi ungaqiniseki ukuthi ungalutholaphi usizo. Kubalulekile ukufuna usizo lochwepheshe abanolwazi kule ndawo, futhi abanendaba nempilo yakho iyonke kanye nokuphila kahle. Ubuchwepheshe bethu obuchwepheshile buzohlinzeka ngokwelashwa okuyimfihlo nokuyimfihlo futhi kuzokusekela zonke izinyathelo zakho. Iphilisi Lokuqeda litholakala kwabesifazane kuze kube amasonto angamashumi amabili nesishiyagalombili (izinsuku ezingu-112) kusukela esikhathini sakho sokugcina. Kuyindlela ehlukile kune-in-office, inqubo yokukhipha isisu ngokuhlinzwa. Iziguli ziyakwazisa ukuthi ziyakwazi ukuhlala ngokunethezeka kwekhaya lazo ukuze zizwele inqubo yamaphilisi okukhipha isisu. Lapho ungasese ekhaya lakho, uzozwa ukopha okuthile futhi ucindezeleke. Sizokunikeza umuthi ukuze ukhululeke phakathi nenqubo. Iziguli zibika kakhulu ukuthi kwakuyisipiliyoni esihle kakhulu esizizwe singokwemvelo futhi sinethezekile.Amaphilisi okukhipha isisu ahlanganisa azokhipha isisu futhi akusize ukhiphe ukukhulelwa kwakho ngaphandle kokusebenzisa ukuhlinzwa. Sisebenzisa kuphela AMAPHILISI aphephile nahloliwe alawulwa ochwepheshe bethu bezokwelapha ababhalisiwe
Amaphilisi Okukhipha Isisu Okuqeda Ukukhulelwa. Uma udinga ukukhipha isisu endaweni ethokomele yekhaya lakho bese u-oda amaphilisi ethu okukhipha isisu ukuze ukhiphe isisu esisheshayo nesingenabuhlungu. Thola izinsiza ezihamba phambili zokukhipha isisu kithi eNingizimu Afrika.